Su'aalaha la Weydiiyo - Axdiga Barashada Summit
Fasallada Qofka / Taageerada / Hawlgelinta
Summit Shaqaaleynta ayaa had iyo jeer la isweydiiyo su'aalaha.
Sidee maalin caadi ah umuuqataa?
Waa hawlo fara badan oo dhammaantood ku lug leh kor u qaadista ka-qaybgalka ardayda iyo natiijooyinka ardayda oo la wanaajiyey.
Waxbarida tooska ah ee internetka iyadoo la adeegsanayo ZOOM, dhisida koorsada cusub ee CANVAS, hubinta emaylka loogu talagalay wada xiriirka ardayda ama waalidiinta, dejinta umeerin ama shirarka faragelinta, ka shaqaynta ardayga ardeyda manhaj kala duwan, siinta jawaab celin toos ah oo tayo leh.
Wadashaqeynta kooxda ka kooban waxyaabahaaga ama ka wargalinta goobtayada jir ahaaneed ee howlaha qofka.
Waxaa jira WIDE noocyo kala duwan ah oo hawl maalmeedka xasaasiga ah iyo mashaariicda dhaadheer oo dhaadheer oo ka dhigaya noqoshada aqoonyahan toosan xirfad firfircoon oo muhiim ah.
Miyaan ka shaqeeyaa guriga?
Taasi waxay kuxirantahay booska. Qaar badan oo ka mid ah xubnaha kooxdayada waxay leeyihiin xafiis guri. Waxaan aad u qiimeyneynaa wada shaqeynta, shaqada kooxda, iyo iskuduwaha waaxyaha waxaanna u aragnaa tan tan sida ugu wanaagsan in loo qabtay iyadoo si joogto ah looga qeyb qaadanayo qofka DHAMMAAN macalimiinta waxay u soo gudbiyaan xarunta waxbarashada talaadada iyo khamiista iyo jimco kasta oo kale howlaha kobcinta ardayda ama shirarka shaqaalaha iskaashiga ah.
Sidee u eg tahay in loo shaqeeyo Summit?
Wadashaqeyntu waa furaha. Inta udhaxeysa iyo waaxyaha dhexdooda waxaa jira wada shaqeyn wadajir ah oo ficil ah si loo xaliyo dhibaatada, la wadaago, loo tababaro, loona taageero midba midka kale. Waxaan ku leenahay hogaamiyayaal waaxyo badan oo tababara lana taliya shaqaalaha cusub. Hadafkeenu waa inaan shaqaalaysiiyo musharaxa saxda ah ee qoyska Summit.
Annaga oo ah shaqaale ahaan, waxaan la tacaali doonnaa caqabado aad u weyn xagga waxbarashada Oregon.
Ka koox ahaan waxaan horay ugu soconeynaa kacaanka waxbarashada dijital ah ee gobolka ka Hogaamiye ahaan. Natiijooyinka ay ardaydeenu kasbadeen waa natiijo iskaashi joogto ah.
Hoggaankeennu wuxuu si joogto ah u raadsadaa horumarin xirfadeed, wuxuu abuuraa waqtiyo qiimo leh, wuxuuna tilmaamaa hoggaamiyeyaasha xilalka iyo koritaanka cusub. Axdiga Barashada Summit waa # 1 Ururka Aan Macaash doonka aheyn ee Oregon (oo ay qiimeeyeen shaqaalaheena).
Jaartarka Wax-barashada Sumcadda ma wuxuu qeyb ka yahay Ururka?
Maya, Shir-madaxeedku qayb kama aha midowga macallinka Oregon. Waxaan nahay iskuul charter ah oo aan macaash doon ahayn. Waxaan nahay xubno ka tirsan PERS waxaanan nahay PERS oo qaadata loo shaqeeye - waxaan bixinnaa tabarucaada qorshaha hawlgabka.
Miyaad wax yar ka sharixi kartaa amniga shaqada sida shaqaale Summt ah?
Markaan go'aan qaadanayno inaanu la shaqeyno Axdiga Wax-barashada ee Summit, waxaan rajeyneynaa dadaal dheer iyo isfaham labada dhinac ah.
Shir-madaxeedku qayb kama aha midowga macallinka. Taa baddalkeeda, macallin kasta waxaa dib loo eegaa oo lagu taageeraa si joogto ah sannad kasta. Hadafyada waxqabadka shaqsi ahaan ayaa loo sameeyaa waxayna ku xiran yihiin koritaanka ardayda, kobaca barnaamijka, iyo horumarka shaqsiyadeed ee shaqsiyeed. Kulliyaddayada inteeda badani way inala joogeen muddo dheer oo caadi ahaan kama wareejinno jagooyinka. Waxaanan si taxaddar leh ula soconnaa miisaaniyaddayada maaliyadeed si aan u hubinno in jago kasta oo la shaqaaleysiiyo ay ka mid tahay qoyskeenna muddo dheer.
Sideen ku heli karaa macluumaad dheeri ah
Habka loo doorbiday si loo helo macluumaad dheeri ah waa emaylka. On ugu weyn bogga shaqada waxaa jira foom xiriir ah oo si toos ah ugu diraya xiriiriyaha agaasimaha, Shaqaalaha, iyo Maareeyaha Xafiiska.
Tigard, AMA 97223